International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Press Release: Time for the Government to Accept the Reality of Human Rights Problems, Take Effective Measures and Move Forward
Press Release: Time for the Government to Accept the Reality of Human Rights Problems, Take Effective Measures and Move Forward
Today, Burma/Myanmar's human rights situation was reviewed by the United Nations Human Rights Council Working Group on the Universal Periodic Review (UPR) in Geneva. The report of the Myanmar Government's delegation includes details of government activities to fulfill their commitments from the first UPR cycle but fails to take note serious ongoing human rights violations and challenges into account.
"Rampant corruption and bribery, unfair rulings against political activists and human rights defenders, the absence of an independent national bar association, and impunity for security personnel are some of the major challenges for Myanmar's judicial system today", said Aung Myo Min, Director of Equality Myanmar.
When it comes to legal reform, the State Report proudly refers to the 171 laws that have been amended or enacted since 2011 up until the time of writing the report. In contrast, the Burma/Myanmar UPR Forum takes note of many old oppressive laws such as Myanmar Penal Code 1861 and the Unlawful Association Act 1908, more recent laws such as the media laws, the Association Registration Law, the Freedom of Assembly and Procession Law, and the national race and religion protection laws as well as the rise of ultra-nationalist Buddhist groups. "These situations are some of the main sources of threats to fundamental human rights such as freedom of expression, association, religion, and the rights of women", said U Myo Win, Director of Smile Education and Development Foundation.
"The National Report makes no mention of the rights of indigenous people. Although there have been notable ceasefire achievements which are highly praised in the National Report, there is as much intense fighting today as there was before the signing of ceasefires", said Mr. Lian Bawi Thang Coalition of Indigenous in Myanmar/Burma.
In sum, despite the much praised reform process, serious human rights violations continue until the final days of the current government's term in office. The Burma/Myanmar UPR Forum is very concerned that the government lacks the will to acknowledge ongoing human rights violations and continues to deny problems until these final days. We call on the Government to recognize the reality of the human rights situation on the ground and begin genuine efforts to address its human rights challenges as one of the first steps foragenuine reform process.
Aung Myo Min - Equality Myanmar (+41 76771 3553) myominburma@gmail.com (Switzerland)
Myo Win - Smile Education and Development Foundation (+41 76293 7607) (Switzerland)
(၆) ရက်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်
"အစိုးရအနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးပြဿနာ အခြေအနေမှန်ကိုလက်ခံ၍ ထိရောက်သော ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုများပြုလုပ်ကာ ရှေ့သို့လှမ်းချီရမည့် အချိန်ရောက်ပြီ"
ယနေ့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျနီဗာမြို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများကို ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ Universal Periodic Review (UPR) လုပ်ငန်းအဖွဲ့က ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှု များပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မြန်မာအစိုးရကိုယ်စားလှယ် များ၏ အစီရင်ခံစာထဲတွင် ယခင်ကပေးထားခဲ့သော ကတိကဝတ်များကို အစိုးရအနေနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော ဆောင်ရွက်ချက်များအကြောင်းကို အသေးစိတ်စီကုံးဖော်ပြထားသော်လည်း ဆိုးဝါးသောလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများစွာအကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြချက်ကို မတွေ့ရပေ။
စာမျက်နာ(၂၂) မျက်နှာရှိ အစိုးရအစီရင်ခံစာတွင် လက်ရှိအစိုးရလက်ထက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွက်ချက် များအကြောင်းကို အကျယ်တဝင့်ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ထိုဖော်ပြချက်များတွင် မြန်မာယူပီအာဖိုရမ် အပါအဝင် အခြားအဖွဲ့အစည်း များစွာ၏ အစီရင်ခံစာများတွင်ပါရှိသည့် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအပေါ်ထင်ဟပ်သည့် ဖော်ပြချက်များ အလွန်နည်းပါးခဲ့ကြောင်းတွေ့ရ၏။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် ယခင်စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကာလများနည်းတူ ဆိုးဝါးသော လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေမှန်များကို အသိအမှတ်ပြုလက်ခံလိုစိတ် မရှိကြောင်း ဖော်ပြနေသည်။
တရားရေးစနစ် ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပုဒ်မများနှင့် ပြည်ထောင်စုတရား စီရင်ရေး ဥပဒေအား ရည်ညွှန်းချက်များအပြင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ကိုးကား ဖော်ပြထားကာ တရားရေးစနစ် အမှီအခိုကင်းအောင်ကြိုးပမ်းထားကြောင်း အစိုးရအစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားစီရင်ရေးစနစ်တွင် တရားရေးအာဏာပိုင်များ၏ ဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာကို အုပ်ချုပ်ရေးမှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သော သာဓကများစွာရှိနေသည်။
ညီမျှခြင်း မြန်မာ၏ ညွန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ ဦးအောင်မျိုးမင်းက ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ၊ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုတွေရှိနေတာ၊ နိုင်ငံရေးတက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူ တွေအပေါ် မမျှတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာ၊ လွတ်လပ်ပြီးအမှီအခိုကင်းတဲ့ နိုင်ငံတော်အဆင့် ရှေ့နေကောင်စီမရှိတာ၊ ကျူးလွန်တဲ့ တပ်မတော် သားများအပါအဝင် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေအပေါ့် အပြစ်ပေးအရေးယူခံရတာကနေ ကင်းလွတ်နေတာတွေက မြန်မာနိုင်ငံတရား ရေးစနစ်ကို အခုအချိန်ထိ စိန်ခေါ်နေဆဲပါ" ဟု ဆိုပါသည်။
အစိုးရအစီရင်ခံစာတွင် ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ အစီရင်ခံစာတင်သွင်းချိန် အထိ ဥပဒေပေါင်း (၁၇၁) ကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသစ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင် ခဲ့ကြောင်း ဂုဏ်ယူစွာ ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော် ၁၈၆၁ ခုနှစ် ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ၊ ၁၉၀၈ ခုနှစ် တရားမဝင်အသင်းဥပဒေ တို့အပြင် အသစ်ပြဋ္ဌာန်းထားသော မီဒီယာဥပဒေများ၊ အသင်းအဖွဲ့များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ၊ လွတ်လပ်စွာစုဝေးခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာစီတန်း လှည့်လည်ခွင့်ဥပဒေ၊ အမျိုးဘာသာသာသနာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေများနှင့် အစွန်းရောက်ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားရေးအဖွဲ့များ အားကောင်း လာခြင်းကို တွေ့နေရသည်။ "ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဟာ အခြေခံ အခွင့်အရေးတွေဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ် စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ သင်းပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ လူ့အခွင့်အရေးတို့အပေါ် ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ အခြေခံ အကြောင်းတရားတွေ ဘဲဖြစ်ပါတယ်" ဟု Smile Education and Development Foundation ဒါရိုက်တာ ဦးမျိုးဝင်းက ဆိုပါသည်။
ယခုအချိန်အထိ တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်များ ခိုင်မာမှုမရှိခြင်း၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများနှင့် လူနည်းစုများ၏ အခွင့်အရေးကို အသိအမှတ်ပြုမှုမရှိခြင်း တို့သည် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားတန်းတူရေးရရှိနိုင်ခွင့် အလားအလာကို အထူးမှေးမှိန်စေသည်။
"အစိုးရအစီရင်ခံစာထဲမှာ ဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး တွေနဲ့ ပတ်သက်၍ တလုံးမှ မဖော်ပြထားပါဘူး။ တိုင်းရင်းသား တွေအတွက် ပိုစိုးရိမ်စရာကောင်းတာ က အစိုးရအစီရင်ခံစာထဲမှာ အမွှန်းတင်ထားသလို အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြင်သာတဲ့ အကောင်အထည်ဖော်မှုတွေ ရှိနေပေမဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်တွေကို လက်မှတ်မထိုးခင် အချိန်ကလိုဘဲ ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲပါ" ဟု ဌာနေတိုင်းရင်းသားများညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် Mr. Lian Bawi Thang က ဆိုပါသည်။
လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများကြောင့် သိန်းနှင့်ချီသော ပြည်တွင်း ဒုက္ခသည်များ ရှိခဲ့ပြီး မကြာမီက ပြန်လည်တိုးမြင့်လာသော အစိုးရတပ်မတော်နှင့် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တပ်မတော် (SSPP/SSA) တိုက်ပွဲများကြောင့် အသစ် ထပ်မံထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသော ဒေသခံ ပြည်သူပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်ရှိနေသည်။ ဤအခြေအနေသည် အစိုးရနှင့် တပ်မတော်၏ စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အပေါ်ထားရှိသော တာဝန်ယူမှုနှင့်ရိုးသားမှုအပေါ် များစွာစိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်စေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းဝင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်(၂)ရက်သာ လိုတော့သည့်အချိန်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ နှင့်စပ်လျှင်းသည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် ပါတီစည်းရုံးရေး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအား အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် လျှောက်ထားသော မွတ်စလင်ဘာသာဝင်များအား ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမပြုနိုင်ရန် စနစ်တကျကန့်သတ်ထားခြင်း၊ ပြည်ပရောက် မဲပေးခွင့်ရှိသူများနှင့် ပြည်တွင်းရှိ မဲပေးခွင့်ရှိသူများ အထူးသဖြင့် ဘာသာရေးလူနည်းစုများနှင့် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစု သန်းပေါင်းများစွာ မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးခြင်း တို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် အစိုးရနှင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့် ၎င်းအခြေအနေများအပေါ် ထိရောက်သော ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။
အနှစ်ချုပ်ဆိုရသော် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအပေါ် အမွှန်းတင်မှုများစွာရှိနေသော်လည်း ဆိုးဝါးသော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများသည် လက်ရှိအစိုးရအာဏာသက်တမ်း နောက်ဆုံးနေ့များအထိ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်ကို တွေ့ရ သည်။ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေအား အစိုးရမှအသိအမှတ်ပြုလိုသည့်ဆန္ဒမရှိပဲ ပြဿနာများ ရှိနေသည်ကို ယနေ့အချိန်အထိ ဆက်လက်ငြင်းဆန်နေသည့်အပေါ် မိမိတို့မြန်မာယူပီအာဖိုရမ် အနေဖြင့် အလွန်စိုးရိမ်မိပါသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် အောက်ခြေတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော လူ့အခွင့် အရေးပကတိအခြေအနေမှန်ကို အသိအမှတ်ပြုလက်ခံ၍ လူ့အခွင့်အရေး စိန်ခေါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန် စစ်မှန်သော ကြိုးပမ်းမှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် စစ်မှန်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ခြေလှမ်းတစ်ခု လျှောက်လှမ်းရန် မြန်မာယူပီအာဖိုရမ်မှ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုပါသည်။
ဦးအောင်မျိုးမင်း - Equality Myanmar (+41 76771 3553) myominburma@gmail.com (Switzerland)
ဦးမျိုးဝင်း - Smile Education and Development Foundation (+41 76293 7607) (Switzerland)
ဂျိုးဇက်ဝါး, Equality Myanmar 959799 040344) joseph@equalitymyanmar.org (Myanmar)
ဒေါ်ခင်ဥမ္မာ, Burma Partnership (+66 81 884 0772) khinohmar@burmapartnershop.org (Thailand)